ပတ်လမ်းတစ်ခုဟူသည် အဘယ်နည်း- ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အမျိုးအစားများနှင့် အရေးပါမှု | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 05/05/2022 10:00 | နက္ခတ္တဗေဒ
နက္ခတ္တဗေဒ၊ နေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဂြိုလ်တွေအကြောင်း ပြောတဲ့အခါ ပတ်လမ်းကြောင်းအကြောင်း အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သို့သော် လူတိုင်းမသိပါ။ ပတ်လမ်းဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လောက်အရေးကြီးသလဲ ၊ သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။ ပတ်လမ်းတစ်ခုသည် စကြာဝဠာအတွင်းရှိ ကောင်းကင်ကိုယ်ထည်တစ်ခု၏ လမ်းကြောင်းဖြစ်ကြောင်း ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့် ဆိုနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ပတ်လမ်းတစ်ခုသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် အရေးပါပုံတို့ကို ပြောပြပါမည်။
1 ပတ်လမ်းဟူသည် အဘယ်နည်း
ရူပဗေဒတွင်၊ ပတ်လမ်းတစ်ခု အရာဝတ္ထုတစ်ခုက အခြားအရာတစ်ခုက ဖော်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး ဗဟိုတွန်းအားတစ်ခုရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်မှာ အဲဒီလမ်းကြောင်းကို လှည့်ပတ်နေပါတယ်။ ကောင်းကင်ကိုယ်ထည်၏ ဆွဲငင်အားအဖြစ်။ ဤသည်မှာ အရာဝတ္ထုတစ်ခုသည် ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုပတ်ပတ်လည်တွင် ရွေ့လျားသွားသည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး အစပိုင်းတွင် ၎င်းကိုမထိခိုက်စေဘဲ ၎င်းနှင့်လုံးဝအကွာအဝေးမဟုတ်ပေ။
XNUMX ရာစုကတည်းက (Johannes Kepler နှင့် Isaac Newton တို့သည် ၎င်းတို့အား ထိန်းချုပ်နိုင်သော ရူပဗေဒနိယာမများကို ရေးဆွဲခဲ့ကြသောအခါ)၊ ပတ်လမ်းများသည် စကြဝဠာ၏ရွေ့လျားမှုကို နားလည်ရန် အထူးသဖြင့် ကောင်းကင်နှင့် အနုမြူဓာတုဗေဒတို့နှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပတ်လမ်းများတွင် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး elliptical၊ စက်ဝိုင်းပုံ သို့မဟုတ် ရှည်လျားပြီး parabolic ဖြစ်နိုင်သည်။ (ပါရာဘိုလာပုံသဏ္ဍာန်) သို့မဟုတ် ဟိုက်ပါဘိုလာ (ဟိုက်ဘိုလာကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍာန်)။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ပတ်လမ်းတစ်ခုစီတွင် အောက်ပါ Kepler ဒြပ်စင်ခြောက်ခုပါရှိသည်။
သင်္ကေတ i ဖြင့် ဖော်ပြသော ပတ်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လေယာဉ်၏ ယိုင်၊
သင်္ကေတ Ω တွင် ဖော်ပြထားသော အတက်အဆင်းရှိသော node ၏ လောင်ဂျီတွဒ်။
သင်္ကေတeဖြင့်ဖော်ပြသော အဝန်းမှသွေဖည်မှု သို့မဟုတ် eccentricity သို့မဟုတ် ဒီဂရီ။
semimajor ဝင်ရိုး (သို့) အရှည်ဆုံး အချင်း၏ ထက်ဝက်ကို သင်္ကေတaဖြင့် ဖော်ပြသည်။
perihelion သို့မဟုတ် perihelion ကန့်သတ်ဘောင်၊ ω သင်္ကေတဖြင့် ဖော်ပြသော အတက်အဆင်း node မှ perihelion အထိ ထောင့်။
ကာလ၏ပျမ်းမျှကွဲလွဲချက် သို့မဟုတ် လွန်သွားသောပတ်လမ်းကြောင်း၏အပိုင်းအစ၊ M0 သင်္ကေတဖြင့်ဖော်ပြသောထောင့်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။
ပတ်လမ်းအတွင်း ကြည့်ရှုနိုင်သော အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် ဘဲဥပုံ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ဘဲဥပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။
ဂြိုလ်များကိစ္စတွင်၊ ပတ်လမ်းများသည် စက်ဝိုင်းလုနီးပါးဖြစ်သည်။
ပတ်လမ်းထဲတွင်၊ သင်သည် မတူညီသော အရာဝတ္ထုများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ လများ၊ ဂြိုလ်များ၊ ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများနှင့် လူလုပ်ကိရိယာအချို့။
၎င်းတွင် အရာဝတ္ထုများသည် ဆွဲငင်အားကြောင့် အချင်းချင်း လှည့်ပတ်နိုင်သည်။
တည်ရှိနေသော ပတ်လမ်းတိုင်းတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် eccentricity ရှိပြီး၊ ၎င်းမှာ ပတ်လမ်းကြောင်း၏ လမ်းကြောင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော စက်ဝိုင်းတစ်ခုနှင့် ကွဲပြားသည့် ပမာဏဖြစ်သည်။
၎င်းတို့တွင် အမျိုးမျိုးသော အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများ ၊ တိမ်းစောင်းမှု၊ eccentricity၊ ဆိုလိုရင်းကွဲလွဲမှု၊ nodal longitude နှင့် perihelion ကန့်သတ်ချက်များ။
ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်း၏ အဓိကအရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ရာသီဥတု၊ သမုဒ္ဒရာများ၊ လေထု၊ လေထုနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ တိကျသော စူးစမ်းလေ့လာမှုများကို ရှာဖွေရန် တစ်ချိန်တည်းတွင် အရေးကြီးသည့်အချက်မှာ ကမ္ဘာမြေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် တာဝန်ရှိသည့် ဂြိုဟ်တုအမျိုးအစားများ ထားရှိနိုင်စေရန်၊ မြေကြီးအတွင်း၌ပင်။ မြေကြီး။ ဂြိုလ်တုများသည် သစ်တောပြုန်းတီးမှု၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှု၊ တိုက်စားမှုနှင့် ကမ္ဘာမြေ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုစသည့် ရာသီဥတုအခြေအနေများကဲ့သို့သော အချို့သော လူသားများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
ဓာတုဗေဒတွင်၊ ၎င်းတို့တွင် မတူညီသောလျှပ်စစ်သံလိုက်အားသွင်းမှုများကြောင့် နျူကလီးယပ်တစ်ဝိုက်တွင် အီလက်ထရွန်များ ပတ်လမ်းများအကြောင်းပြောကြသည် (အီလက်ထရွန်များကို အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သည်၊ ပရိုတွန်နှင့် နျူထရွန်နျူကလိယအား အပြုသဘောဖြင့် အားသွင်းသည်)။ ဤအီလက်ထရွန်များသည် တိကျသောလမ်းကြောင်းများမရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် စွမ်းအင်ပမာဏပေါ်မူတည်၍ atomic orbitals ဟုခေါ်သော ပတ်လမ်းများအဖြစ် မကြာခဏဖော်ပြကြသည်။
အက်တမ်ပတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီကို ဂဏန်းနှင့် အက္ခရာဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။ ဂဏန်းများ (1၊ 2၊ 3…7အထိ) သည် အမှုန်များ ရွေ့လျားနေသည့် စွမ်းအင်အဆင့်ကို ညွှန်ပြပြီး စာလုံးများ (s, p,dနှင့် f) တို့သည် ပတ်လမ်းကြောင်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ညွှန်ပြနေပါသည်။
စက်ဝိုင်းအစား၊ elliptical orbit သည် ellipse၊ အပြား၊ ရှည်လျားသော စက်ဝိုင်းကို ဆွဲသည်။ ဤပုံ၊ ဘဲဥပုံတွင် foci နှစ်ခုရှိသည်။ အဝန်းနှစ်ခု၏ဗဟိုဝင်ရိုးများသည် ၎င်းကိုဖွဲ့စည်းသည့်နေရာတွင်ရှိသည်။; ထို့အပြင်၊ ဤပတ်လမ်းအမျိုးအစားသည် သုညထက်ကြီးသော eccentricity ရှိပြီး တစ်ခုထက်နည်းသည် (0 သည် စက်ဝိုင်းပတ်လမ်းနှင့် ညီမျှသည်၊ 1 သည် parabolic ပတ်လမ်းနှင့် ညီမျှသည်)။
နောက်တစ်ခု။ ပတ်လမ်းကြောင်း၏ လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ အမှတ် ( foci နှစ်ခုအနက် တစ်ခုတွင် ) သည် ပတ်လမ်းပတ်ပတ်လည် ပတ်ပတ်လည် ဗဟိုကိုယ်ထည်နှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သည်။
ပိုဝေးတယ်။ ပုံဖော်ထားသောပတ်လမ်း၏ဗဟိုထုထည်မှအဝေးဆုံးဖြစ်သော ပတ်လမ်းလမ်းကြောင်း ( foci နှစ်ခုအနက်တစ်ခုရှိ ) ပေါ်ရှိအမှတ်။
ဂြိုလ်စနစ်အများစုကဲ့သို့ပင်၊ စကြာဝဋ္ဌာ၏ ကြယ်များဖော်ပြသော ပတ်လမ်းများသည် elliptical အနည်းနှင့်အများဖြစ်သည်။ အလယ်ဗဟိုတွင် စနစ်၏ ကြယ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ၊ ဂြိုဟ်များနှင့် ကြယ်တံခွန်များကို ၎င်းတို့၏ ဆွဲငင်အားဖြင့် ရွေ့လျားစေပါသည်။ နေပတ်ပတ်လည်တွင် ပါရာဘိုလစ် သို့မဟုတ် ဟိုက်ပါရောလစ် ပတ်လမ်းများသည် ကြယ်နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု မရှိပါ။ ၎င်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်းအတွက်၊ လသည် ကမ္ဘာနှင့် အတူ လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ ဂြိုလ်တစ်ခုစီ၏ ဂြိုလ်တုများသည်လည်း ဂြိုလ်တစ်ခုစီ၏ ပတ်လမ်းကြောင်းကို ခြေရာခံသည်။
သို့သော်လည်း ကြယ်များသည် အချင်းချင်းလည်း ဆွဲဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ပတ်လမ်းကြောင်း၏ eccentricity ကို အချိန်နှင့်အမျှ ကွဲပြားစေသည့် အပြန်အလှန် ဆွဲငင်အားကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် နေနှင့် အနီးဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် နေနှင့်ဝေးသော ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ဗီးနပ်စ်နှင့် နက်ပကျွန်းဂြိုဟ်တို့၏ ပတ်လမ်းများသည် လှည့်ပတ်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာသည် ၎င်း၏အိမ်နီးနားချင်းများကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘာသာပြန်ဆိုထားသောရွေ့လျားမှုဟုခေါ်သော ၃၆၅ ရက် (တစ်နှစ်ခန့်) ကြာသည့် ဘဲဥပုံပတ်လမ်းဖြင့် နေကို အနည်းငယ်လှည့်ပတ်ပတ်လမ်းနေပါသည်။ ဤရွေ့ပြောင်းမှုသည် တစ်နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ ၆၇,၀၀၀ ခန့်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ ဂြိုဟ်တုတုများကဲ့သို့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပတ်လမ်းကြောင်း လေးခုရှိသည်။
ဘာဟာ (LEO)။ ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်မှ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ မှ ၂၀၀၀ ကွာဝေးသည်။
ပျမ်းမျှ (OEM). ဂြိုလ်၏မျက်နှာပြင်မှ 2.000 မှ 35.786 ကီလိုမီတာ။
မြင့် (HEO) ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်မှ ၃၅,၇၈၆ မှ ၄၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာ အကွာတွင်ရှိသည်။
Geostationary (GEO). ဂြိုလ်မျက်နှာပြင်မှ ၃၅,၇၈၆ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာ၏ အီကွေတာနှင့် ထပ်တူပြုထားသည့် ပတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သုည eccentricity နှင့် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ အကဲခတ်သူတစ်ဦးအတွက် အရာဝတ္ထုသည် ကောင်းကင်၌ ငုတ်လျှိုးနေပုံပေါ်သည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် ပတ်လမ်းတစ်ခုသည် အဘယ်အရာနှင့် ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သည်ကို သင်ပိုမိုသိရှိနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » နက္ခတ္တဗေဒ » ပတ်လမ်းဟူသည် အဘယ်နည်း